Faa'iidooyinka Ilkaha - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Guudmarka Guud ee Carruurta
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Qorshahaaga iyo Daboolidaada > Faa'iidooyinka Ilkaha
Xubnaha CHPW waxay helaan caymiska ilkaha ee carruurta iyo dadka waaweyn
CHPW waxay sahlaysaa in ilkahaaga caafimaad qabaan
Adiga oo ah Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) xubin ka tirsan Apple Health, waxaad caymis ku leedahay adeegyada ilkaha ee loo maro Maamulka Daryeelka Caafimaadka ee Gobolka Washington.
U adeegso kaarkaaga ProviderOne dhakhtarka ilkaha kasta ee aqbala Apple Health.
Intaas waxaa sii dheer, CHPW wuxuu daboolaa dhaawaca shilka ah ee ilkaha.
Raadi dhakhtar ilkood ama dhakhtar qalliin afka ah
Daryeelka ilkaha ee carruurta (6 iyo ka yar)
Carruurta da'doodu tahay 6 iyo wixii ka hooseeya waxay ka heli karaan daryeel ilko oo aan qiimo lahayn iyada oo loo marayo barnaamijka Helitaanka Ilmaha iyo Ilkaha ee Ilkaha (ABCD). Cunug walba waa inuu u tagaa dhakhtarka ilkaha marka ilkahooda ugu horreeya u muuqdaan, ama dhalashadooda koowaad - mid kasta oo ugu horreeya.
Ka hel dhakhtarka ilkaha ABCD agtaada
Daryeelka ilkaha ee dhalinyarada (7-20)
Kaarka 'ProviderOne' wuxuu daboolayaa daryeelka ilkaha ee dhalinyarada da'doodu tahay 20 iyo wixii ka yar. Adeegyada ilkaha ee la daboolay waxaa ka mid ah:
Imtixaanada joogtada ah
Soo saarida (ilkaha jiidaya)
Adeegyo xaddidan ayaa loo heli karaa carruurta leh fiiq-fiiq ama dhibaatooyinka kale ee ilkaha (waxay ku daboolaan adeegyada caafimaad ee lagama maarmaanka ah oggolaansho hore)
Daryeelka ilkaha ee dadka waaweyn (21+)
Kaarka 'ProviderOne Card' wuxuu daboolaa daryeelka ilkaha ee dadka waaweyn ee jira 21 iyo wixii ka weyn. Adeegyada ilkaha ee la daboolay waxaa ka mid ah:
Adeegyada kale ee ilkaha ee xaddidan, oo ay ku jiraan:
Endodontic (kanaalka xididka)
Ilkaha Ilkaha / Ilkaha
Adeegyada ilkaha ee Maamulka Naafada Koritaanka (DDA)
Dadka qaangaarka ah ee leh magaca 'DDA' waxay helayaan dhammaan adeegyada loogu talagalay dadka waaweyn. Waxay sidoo kale helaan caymis loogu talagalay:
Topical fluoride - sadex jeer sanadkii
Sealants - daboolan ilkaha dambe
Crowns - bir bir ah oo keliya, oo loo daboolay ilkaha dambe oo wata dukumiintiyo taageeraya
Adeegyada aan loo daboolin dadka waaweyn
La xiriir Maamulka Daryeelka Caafimaadka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan faa'iidooyinka ilkaha 1-800-562-3022 or  booqo boggooda.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Ogast 10, 2020
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxaa aasaasay 1992 xarumaha caafimaadka bulshada ee Washington. CHPW waxaa ka go'an caafimaadka Washington. Si aad isugu qorto Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Medicaid ama qorshaha Medicare Advantage, waa inaad xaq u leedahay oo aad ku nooshahay aaga adeegga Medicare (Adams, Benton, Chelan, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, King, Kitsap, Lewis, Pierce , Okanogan, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom, Yakima counters in Washington state) ama gobolada Medicaid. Tani maahan sharaxaad dhameystiran ee dheefaha, fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.